Justin Rakotovaoarison no tena anarany, fa Dame de Cœur no ahalalan’ny maro azy eo amin’ny sehatry ny sarimihetsika. Nilaozan’ity mpilalao ity tanteraka ny filalaovana sarimihetsika. Nodimandry omaly tetsy amin’ny Hopitaly HJRA Ampefiloha izay vokatry ny …Tohiny
40 taona : Mpanakanto maro nanotrona an’i Erick Manana tetsy Mahamasina
Ela tsy nifankahita ka nafana ny fiarahana. Taorian’ny fitetezam-paritra samihafa, nitony tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny fankalazan’i Erick Manana ny faha-40 taona niakarany an-tsehatra. Mpanakanto maro omaly no nanotrona azy ary nivoitra sy nanakoako …Tohiny
Tsy nisoroka ny minisi-panjakana sady filohan’ny antoko HVM amin’ny fanakianana tsy marina izay mandeha amin’ny haino aman-jery milaza fa fampielezan-kevitra ny fitokanana ireo zava-bita ataon’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao “famendrofendroana ny filazana fa tsy tokony …Tohiny
Ravan’ny zandary ny 23 aogositra lasa teo, teny amin’ny Anjely Mainty Anosy sy teny Ankadimbahoaka ny tambazotra matanjaka mpanaparitaka vola sandoka eto Antananarivo. Rehefa nahazo fampilazam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny mpitandro filaminana, ny …Tohiny